Kedu otu nkesa IP Address na Olee otú E si eme ya?
Kedu ihe nkesa IP?
Ọtụtụ ihe na-eme ka adreesị IP na-ese okwu siri ike nsogbu nsogbu
A na-enwe nsogbu esemokwu IP mgbe e kenyere njirimara IP dịka otu nkwụsị nkwurịta okwu abụọ na netwọk. Nkọwa nwere ike ịbụ PC, ngwaọrụ mkpanaka, ma ọ bụ ihe ntanetị ọ bụla. Esemokwu IP n'etiti njedebe abụọ na-emekarị ma otu maọbụ ha abụọ enweghị ike maka ọrụ netwọk.
Kedu Adreesị IP na-akpata Nsogbu
Ejiri abụọ (ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ) nwere ike ịnweta adreesị IP na-emegide onwe gị n'ụzọ ọ bụla:
Onye na-elekọta usoro na-enye kọmputa abụọ na mpaghara netwọk mpaghara otu adreesị IP ahụ .
Onye na-elekọta usoro na-enye kọmputa otu adreesị IP dị iche iche na mpaghara DHCP dị na mpaghara ahụ, otu adreesị DHCP na-enyekwa adreesị ahụ kpọmkwem.
Ngwá ọrụ na ihe nkesa DHCP na netwọk na-enye ikikere adreesị ahụ dị ike iji nyefee ọtụtụ kọmputa. Nke a nwere ike ime mgbe a na-etinye ngwaọrụ mkpanaka n'ime ọnọdụ hibernate ma kpọtee n'ụra, dịka ọmụmaatụ.
Onye na-ahụ maka ịntanetị na-eji aka na-enye ndị ahịa abụọ otu adreesị IP ahụ ma ọ bụ n'ụzọ dị egwu.
Ụdị ụdị esemokwu IP ndị ọzọ nwekwara ike ime na netwọk. Dịka ọmụmaatụ, otu kọmputa nwere ike ịnweta otu adreesị IP na ya onwe ya ma ọ bụrụ na ejiri kọmpụta ahụ rụọ ọrụ na ọtụtụ nkwụnye ọkụ. Ndị na-elekọta netwọk nwere ike ịmepụta esemokwu IP site na ijikọta ọdụm abụọ nke netwọk netwọk ma ọ bụ onye ntanetị netwọk n'etiti ibe ya.
Ịmata nkwenye IP
Ozihie njehie ma ọ bụ ihe ngosi ndị ọzọ nke esemokwu IP dịgasị dabere na ụdị ngwaọrụ emetụta na sistemụ arụmọrụ ọ na-agba.
N'ọtụtụ kọmputa Microsoft Windows , ọ bụrụ na ị nwara ịtọ adreesị IP edozi nke na-arụ ọrụ na netwọk mpaghara, ị na-enweta ozi nkwụsị na-esonụ:
Adreesị IP ahụ dị na nke a na-ahazi ahazi ejirila na netwọk. Biko gosipụta otu adreesị IP dị iche.
Na kọmputa Microsoft Windows ọhụrụ ndị nwere esemokwu IP, ị na-enweta ozi nhie ozi balloon na Taskbar ozugbo usoro sistemụ ahụ chọpụtara nsogbu ahụ:
Enwere nsogbu IP na esemokwu ọzọ na netwọk ahụ.
Mgbe ụfọdụ, karịsịa na kọmputa Windows ndị toro eto, ozi yiri nke ndị a nwere ike ịpụta na window windo:
Usoro ahụ achọpụtawo esemokwu maka adreesị IP ...
Idozi Adreesị IP
Gbalịa mee ọgwụ ndị na-esonụ maka esemokwu IP:
Maka netwọk ebe a na-edebe adreesị IP, hụ na a na-ahazi localhost na adreesị IP pụrụ iche.
Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere adreesị e kenyere ya nke ọma, ịhapụ na imegharị adreesị IP ya nwere ike ịrụ ọrụ na esemokwu IP.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na onye na-ahụ maka eriri ngwaọrụ gị nwere server DHCP na-ezighị ezi nke na-akpata ọgba aghara IP na netwọk ụlọ, nweta nkwalite nke router ngwa ngwa iji dozie nsogbu ahụ.
192.168.1.0 Nkọwa Mgbasa Ozi IP
Kedu ihe bụ 'Clownshoes' Na Jargon Online?
Ụlọ Network nwere ike ịkekọrịta Njikọ Ịntanetị Abụọ?
PayPal maka Beginners
Ihe BRT pụtara na mgbe iji mee ya
Ogologo nke WiFi Network
Na-agba ọsọ Ethernet Cables n'èzí
Kedu ka m na - egwu .Day faịlụ?
Kedu otu esi atụpụta Igbe mbata Outlook gị site na Akaụntụ Email
Otu esi eji foto di ka Polaroid
Atụmatụ foto Fireworks
Otú Apple TV si arụ ọrụ
Esi emeghe Mpeebe Na-esote Mgbe I Nhichapụ na Yahoo
Kedu ihe eji ebipụta 3D? - Nyochagharị mmepụta ihe
Mmezi Ngwaahịa kachasị mma nke Microsoft
Ihuenyo ekesa na Desktọpụ Mac ọzọ
Kedu ihe bụ 'Props'? Gịnị Ka Ọganihu Pụtara?
Usoro Okwu Ntuziaka Google Na-eme Ka Ha Nwee Mkpụrụ Akwụkwọ M?
Otu esi esi họrọ Isi Text Fonts
Kedu ka m ga-esi bulite Video na Kọmputa m?
7 Ụdị Ndekọ nke Kwesịrị Inwe 2FA
Kedu ka esi ghota ihe ngosi igbe na SVG
Kedu ihe bụ Reddit AMA?
Mepụta Foto Weebụ Web
Esi esi nweta Nintendo DSi ahịa
Iji JailbreakMe ka JailBreak iPhone & Ngwaọrụ iOS ndị ọzọ
BlackBerry NDỤMỌDỤ: Otu esi kpochapụ Cache World Cache
Dezie osọ Lion X X - Open Directory na ndị ọrụ Network
8 Zoro ezo Nzuzo iPad nke ga-atụgharị gị n'ime Pro